Kutheni uH Triple ebizwa ngokuba nguMdlalo? - Wwe
Kutheni uH Triple ebizwa ngokuba nguMdlalo?
U-Triple H unamagama amaninzi okutyhila kule minyaka idlulileyo. Amagama omnxeba ziindawo eziqhelekileyo kwiWWE, kwaye zihlala zichaza uphawu okanye iimpawu ezithile zomlwi. Umzekelo, emva kwemini, besinomlingane ka-Triple H we-Evolution, 'Umbulali weThe Legend' uRandy Orton, owayebetha nje amavo eWWE asekhohlo, ekunene nakwiziko lonke phakathi kwiminyaka yoo-2000. Isiteketiso samsebenzela ngelo xesha.
Igama lesidlaliso lika-Triple H 'Umdlalo' yayiyinto ebambelele ku-Triple H emva kokuzibiza 'Umdlalo' kwisinyanzeliso esingabhalwanga. Ichaza kathathu u-H njengoyena ubalaseleyo kulo mdlalo hayi umfundi womdlalo. Eyona nto ibalulekileyo kukuba ngumlobi ophambili kwiWWE.
U-Triple H wayifumana njani igama lesidlaliso elithi Umdlalo?
U-Triple H wachaza ILoudwire's Wikipedia: Inyaniso okanye iNtsomi imvelaphi 'yoMdlalo' isiteketiso:
ukristen stewart kunye no-dylan meyer
Nditsho ngokusemthethweni ekukhuthazeni ikhofu, inyuselo engabhalwanga kunye noJim Ross. Sasibuyela emva, yayiyinyuselo engabhalwanga, uJim wangena wangena wathi, ‘Ndizokubuza le mibuzo, phendula indlela ofuna ngayo.’ Kwakunjalo xa ndijika, ndandisiba sisithende esintlangothi-mbini. Ixesha elikhulu emva koko yayikukuba ngumfundi womdlalo. Ufuna ngokwenene ukulunga kweli shishini, kuya kufuneka ube ngumfundi womdlalo. Njengayo nayiphi na into. Ufuna ukuba ngumdlali obalaseleyo we-NBA, kuya kufuneka ube ngumfundi womdlalo, kufuneka ubukele abantu abaze phambi kwakho, kuya kufuneka ufunde yonke into. Yonke loo nto, kwathiwa kakhulu kwishishini lethu. Kwaye kuloo promo, ndisebenzise ngokusemthethweni igama elithi F kwaye kwafuneka bayikhuphe, inyuselo-ntengiso yayintle kangangokuba babefana, 'Siza kuyigcina, siza kukhupha igama elithi F,' kodwa Khange ndicinge nto ngaphezulu kwayo kunoko. Kwaye emva kweveki elandelayo kumabonakude xa ndiphuma, bekukho imiqondiso ethi, 'Kathathu H Umdlalo we-F-ing,' okanye 'iTriple H nguMdlalo' okanye nokuba yayiyintoni na. Umdlalo ubambekile, utshilo uThathu uH. (h / t 411 iMania)
Kwiminyaka engama-20 eyadlulayo namhlanje, nge-25 kaJulayi ngo-1999, ibinguBusuku bangeCawa. UJim Ross wenza udliwanondlebe naye @NtsikeleloTyala . Wazibiza ngokuba ungumfundi womdlalo, kwaye unguye lo mdlalo. Eli lixesha lokuqala azibiza 'Umdlalo,' kwaye ligama lesidlaliso eliya kuthi nca kulo lonke ikhondo lomsebenzi wakhe pic.twitter.com/lMC6HlBHbv
-William Wesley Elm (@ Mnu_WWE_2021) NgoJulayi 25, 2019
Ngaba u-Triple H unawo amanye amagama esiqhulo?
U-Triple H unezidlaliso ezimbalwa, kubandakanya 'Umdlalo'. Uye wabizwa ngokuba 'yi-Cerebral Assain' nguJim Ross ngexesha lokuphawula, kananjalo 'nguKumkani weeKumkani'. Le yokugqibela yavela kumxholo wakhe wesibini wokungena owenziwe nguMotörhead, ingoma eyayinegama elifanayo.
Usuku lokuzalwa olumnandi ku @WWE ilivo, kunye nengqondo ngasemva @WWXT , @NtsikeleloTyala ! pic.twitter.com/Kkqj8DGsOw
kuthetha ukuthini ukuthandana nomntu
-WWE kwi-FOX (@WWEonFOX) Julayi 27, 2021
kuqhelekile ukuthanda omnye umntu ngelixa ukuthandana
Logan kunye nejake paul drama
iimpawu ndizikhangela endodeni
kwenzeka ntoni kwi-wrestling mania